musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Sustainability News » Kutarisana Nazvino Urgent Climate Kodhi Tsvuku
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • dzidzo • Health News • Hospitality Industry • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Sustainability News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
SUNx Malta nhasi yaburitsa mushumo wayo wechipiri wepagore weClimate Friendly Travel pamberi peGlasgow COP 26 Climate Summit. SUNx iEU-based NGO yakagadzwa senhaka yemamiriro ekunze nekusimudzira trailblazer, Maurice Strong.
Chirevo chinoratidza kuwedzera kwenjodzi dzinotungamirwa nemamiriro ekunze uye kuti izvi zvinokanganisa sei chikamu chakakosha cheKufamba neKushanya kwehupfumi hwenyika.
Iyo inodaidzira kushinga kwemamiriro ekunze izvozvi kweKufamba neKushanya zviitiko.
Chirevo ichi chinodaidzira zvakare kudzikisa kusvibiswa kwekubuda uye zvirongwa zvekuchengetedza zvichibva pasainzi, mamiriro ekunze, uye zvinodiwa nevechidiki.
Zuvax ripoti inodaidzira DASH-2-Zero inotsigira ichangoburwa Glasgow Tourism Chiziviso.
Zvichienderana nedata rekutsvagisa rakatarisana, Rondedzero inoratidza kuwedzera kwenjodzi dzinotungamirwa nemamiriro ekunze uye kuti izvi zvinokanganisa sei chikamu chakakosha cheKufamba neKushanya kwehupfumi hwenyika.
Inotsigira iyo Glasgow Tourism Chiziviso uye inokurudzira DASH-2-Zero kutora zvipikirwa zvakaitwa nekukurumidza uye zvichikurudzira kuratidza zvinangwa zve net zero carbon dioxide emissions ye2030 uye zero greenhouse gasi inoburitswa na2050.
Inodaidzira kugadzikana kwemamiriro ekunze izvozvi kweKufamba & Yezvekushanya zviitiko, pamwe nekujekesa kudzora uye kudzikamisa zvirongwa zvinoenderana nesainzi, mamiriro ekunze, uye zvinodiwa nevechidiki.
Inoona huwandu hweshumiro dzekutsigira dzinowanikwa kubatsira makambani uye nharaunda kugara panzira yeramangwana rakanaka rekufamba remangwana.
Inopa yayo Mamiriro ekunze Yehukama Yekufamba Registry yakabatana neUNGlobal Climate Action Portal kubatsira vanobata nezvevashanyi kunyoresa mamiriro ekunze nekusimudzira uye kuratidza kufambira mberi.
Inoziva iyo yepakati kufarira uye chinzvimbo chevechidiki mukutarisana nedambudziko remamiriro ekunze uye mavechidiki ari kubatsira kusimudzira shanduko yakanaka mhiri kweKufamba & Yekushanya chikamu.
Muzvinafundo Geoffrey Lipman, Mutungamiri weSUNx Malta, uye Mutungamiriri we International Climate & Tourism Partner (ICTP), akati, "Hatisi kungofara kutsigira Glasgow Declaration, asi tinotarisira kuti Climate Friendly Travel Report yedu ichakurudzira kuita chaiko uye mhinduro yakanaka kuna UN Secretary General General Guterres yekudaidzira Code Red yeHumanity, yakasimbiswa neIPCC 6th ichangoburwa. Ongororo Yekuongorora. Pfungwa yedu yeClimate Yehukama Kufamba uye yedu yekudaidzira a DASH-2-Zero inogona kuita senzira yekukonzera shanduko nekukurumidza uye mugero kuUN yakatungamirwa 2030/2050 Green uye Yakachena Roadmap yeramangwana riri nani.
“ZUVAx Malta yakateyawo yayo Makumi gumi Vision.
Kuti utore mushumo, tinya pano.
SUNx isangano reEU rakavakirwa, kwete-rekuita purofiti, rakagadzwa senhaka yaMaurice Strong, mamiriro ekunze nekusimudzira piyona hafu yezana ramakore rapfuura. Yakabatana neMalta's Ministry of Tourism uye Consumer Kudzivirira uye Tourism Authority.
SUNx Malta yakagadzira iyo 'Green & Yakachena, Yemamiriro ekunze Anoshamwaridzana Ekufamba Sisitimu' kubatsira Makambani Ekufamba & Ekushanya nenharaunda kushandukira kune Nyowani Yemamiriro Ehupfumi. Chirongwa ichi chakavakirwa pakudzikisa kabhoni, kusangana neZvinosimudzira Kubudirira Zvirongwa, uye kuenzanisa nzira yeParis 1.5C. Icho chiito uye dzidzo yakanangidzirwa - kutsigira makambani anhasi nenharaunda kuunza zvishuwo zvavo zvemamiriro ekunze uye kukurudzira vatungamiriri vechidiki vemangwana kuti vagadzirire kupa mubayiro mabasa mudunhu reKufamba.